Fikarohana cannabis sy ny mari-pahaizana marijuana - Nahoana no sarotra ny mianatra cannabis?
Ny fandalinana marijuana dia nohatanin'ny lalàna federaly
Fanamboaran-dàlana fikarohana momba ny cannabis
Ny fikarohana cannabis na marijuana Nosakanan'ny governemanta federaly nandritra ny am-polony taona maro satria ny marijuana dia fandaharam-potoana iray ao anatin'ny hetsika akora voafehy. Manome antsipiriany ny sakana amin'ny fikarohana rongony izahay izay manampy amin'ny fitazonana ny stigma atrehany eo amin'ny fiarahamonina.
"Ny famonoana zava-mahadomelina dia fahavalon'ny besinimaro isa. " Filoha Dick Nixon, 18 Jona 1971
Ny fampielezan-kevitra Nixon tamin'ny 1968, ary ny Trano Fotsy Nixon taorian'izany, dia nanana fahavalo roa: ny antiwar sisa sy ny mainty hoditra. Azonao ve izay lazaiko? Fantatray fa tsy azonay atao tsy ara-dalàna ny manohitra ny ady na ny mainty, fa amin'ny fampifandraisana ny vahoaka amin'ny hipopotama amin'ny rongony sy ny mainty amin'ny heroin, ary avy eo manao heloka bevava amin'izy roa ireo dia afaka manelingelina ireo vondrom-piarahamonina ireo izahay. Azontsika atao ny misambotra ny mpitarika azy ireo, manafika ny tranony, manapotika ny fivorian'izy ireo ary manaratsy azy ireo isan'alina amin'ny vaovao hariva. Fantatray ve fa mandainga momba ireo zava-mahadomelina isika? Mazava ho azy fa nanao izany isika.
-  John Ehrlichman, mankany Dan Baum Harper's Magazine tamin'ny 1994, momba ny Filoha Richard Nixonny ady amin'ny zava-mahadomelina, nambara tamin'ny 1971.
FIVAVAHANA MISY: Lalàna cannabis any Maryland
FIVAVAHANA MISY: Lalànan'ny cannabis any Kentucky
Salama, izaho Tom ary afaka mahita ahy ianao amin'ny alàlan'ny mpisolovava googling cannabis ary mikitika ny tranokalako mpisolovava indostrian'ny rongony.com - loharanom-pahalalana bebe kokoa momba ny indostria tadiavinao hidirana - Androany dia miresaka momba ny fandraràna ny fikarohana rongony ao amin'ny firenena izahay. Izany no antony mahatonga ny lainga sy lainga maro be hinoan'ny olona maro raha ny resaka rongony. Satria tsy ara-dalàna ny fikarohana azy io hatramin'ny nahatongavan'ny lalàna momba ny tany ny lalàna mifehy ny tany tamin'ny Mey 1971.
olana atrehin'ny mpikaroka cannabis
Eny, tsy rariny ny milaza fa tsy ara-dalàna ny fikarohana rongony. Tsy nahazo famatsiam-bola izy io, fa ny zavatra ratsy ihany no azonao atao - tsy ny zavatra tsara. Sa ahoana izany, fikarohana amin'ny ankapobeny hahitana ny zava-misy. Fantatrao ny marina, ny tanjon'ny siansa rehetra. Yeha, tsy vitanao - mbola tsy vitanao - ny manao izany ho an'ny governemanta federaly ..
Fikarohana fikarohana momba ny tsiranoka goavambe avy amin'ny lasa taloha
Ohatra, tamin'ny 1978… ny mpikaroka momba ny ati-doha Dr. Robert Heath avy ao amin'ny Oniversiten'i Tulane dia nilaza fa ny gidro mifoka andiany iray isan'andro dia nisy fiovana microscopic fa maharitra amin'ny anatomy ati-doha. Izany no karazana fandinihana eken'ny governemanta. Tsy maintsy nianatra marijuana ianao noho ny fahavoazany. Eny, izany dia fanambarana mahery setra iray - tsy voatery nandinika rongony ianao noho ny vokadratsiny - fa ireo ihany no fandinihana natao hahazoana fankatoavana.
Andao hizaha ireo sakana rehetra izay tsy maintsy lalovanao alohan'ny hahazoana fankatoavana amin'ny fanaovana fikarohana rongony - handeha haingana isika amin'izany - fa ny rohy dia ao anaty ny fanehoan-kevitra hivoahanao amin'ny fialam-bolinao - rehefa avy nopotehinao ireo tian'izy ireo - ary mikapoka ny lakolosy raha misy fampandrenesana rehefa vaovao ny fanaovan-dalàna ny rongony.
Ny fandinihana ireo voka-dratsy ara-pahasalamana na zava-bitan'ny zavamaniry rongony dia mitaky fankatoavana marobe avy amin'ny governemanta federaly, ary hiresaka momba ny fanadihadiana iray hafa nataon'i Dr. William Slikker izay nanandrana nanamarina ny marijuana no nahatonga ny fahasimban'ny ati-doha tamin'ny fanadihadiana tamin'ny 1978 - fa voalohany andao hojerentsika hoe firy ny hoopana alohan'ny hanaovana ny siansa.
Voalohany, izay te-hitady cannabis dia tsy maintsy mametraka fampiharana vaovao momba ny zava-mahadomelina amin'ny fanadihadiana amin'ny FDA.
Avy eo, ny mpikaroka dia mila mahazo valan-jaza hianatra, ka izany no niantso ny Ivotoerana Nasionaly momba ny Famoahana zava-mahadomelina ary mangataka taratasy fahazoan-dàlana hahazo ny valan-jaza amin'ny fandalinana.
Avy eo, izy ireo dia tsy maintsy mangataka ny fisoratana anarana DEA sy ny fahazoan-dàlana amin'ny site alohan'ny hanaovana ny fikarohana momba ny cannabis na ny derivative.
Avy eo, ny mpikaroka dia mandefa ny fangatahana any amin'ny Center for Evaluation and Research and Drug. T
Nilaza i FDA fa tapa-kevitra ny hamporisika ny fampandrosoana ny vokatra rongony mifandraika amin'ny rongony - sy ny fikarohana momba ny loharanon-karena mba hangataka Fampiharana fanafody vaovao mialoha ny famotopotorana.
Tsy hanaiky ny fikarohana gnabis mora ny FDA
Satria miharihary fa ny dingana fahenina amin'ity dingana ity dia eo amin'ny nahavoa ny rindrin'ny biriky. Manana 30 andro ny FDA hijerena ny fampiharana anao - raha toa ka tonga hatreto ianao - hahazoana antoka fa tsy iharan'ny risika tsy mitombina ny lohahevitry ny fikarohana. Tsy avelan'ny FDA ny fikarohana raha tsy manome alalana “azo antoka hirosoana”. Avy eo ny mpikaroka dia afaka mahazo rongony vitsivitsy avy any Mississippi - izay loharano tokana maniry.
Ny fikarohana siantifika siantifika farany
Ny talen'ny Executive Denver of Excise and Licences any Denver, Ashley Kilroy dia nilaza fa ny fahazoan-dàlan'ny Fikarohana sy Fampandrosoana dia ampahany amin'ny dingana voalohany amin'ny fanavaozana ny lalàna marijuana ao an-tanàna.
Kilroy dia niantso ny fahazoan-dàlana R&D ho fotoana ara-toekarena vaovao ho an'ny tanàna.
“Mihevitra izahay fa karazan-dàlana manan-danja izany… hanampy hanohy hitandrina hatrany izany Denver eo amin'ny faran'ny fankatoavana ny marijuana ary arovy ny lazanay amin'ny maha-mpitarika anay amin'ny indostrian'ny vatan-drindra, ”hoy izy.
HAMAKY ORDINAN'NY FANARAHANA MARIJUANA AVY AMIN'NY DENVER
Ny hevi-dehibe ataonay dia ny ankamaroan'ny fikarohana rongony tsy vita akory - ity no be indrindra nataon'ny firenentsika - ohatra i Denver vao avy namorona fahazoan-dàlana hikaroka rongony - mino aho fa ity karazana fahazoan-dàlana ity no ho an'ny taona 2020 - ataontsika izao fikarohana rongony any amerika indray - mihoatra ny nataontsika 30 taona lasa izay.
Fa tamin'izay no nolavina ny fanambarana ara-tsiansa fa ny marijuana dia manimba ny ati-doha amin'ny fandalinana nataon'ny dokotera Slikker. Natao tamin'ny gidro indray izany, saingy tsy nahita fiovana tamin'ny atidohany - nampiditra THC bebe kokoa aza ho voalavo laboratoara, ary tsy nisy. Rohy mankany amin'ny fandinihana ao amin'ny famaritana.
Ka maninona ny governemanta federaly no manaiky ny fandinihana ny faharesena amin'ny toerana ofisialy fa ny cannabis dia fandaharam-potoana 1 satria izany:
Manana hery manararaotra manararaotra;
Tsy nanaiky ny fampiasana fitsaboana any Etazonia amin'izao fotoana izao;
Tsy manana fiarovana azo ekena ho ampiasaina eo ambany fanaraha-maso ara-pitsaboana.
Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny hamaritana ny fikarohana rongony dia vao mainka miharihary fa diso ny fandaharam-potoanan'ny rongony - ary ny stigma mamela izany ho tsy ara-dalàna dia halazo any amin'ny lasa hadalantsika rehefa nino ny angano isika.
Ka tsy ara-dalàna ny fandalinana azy io - fa ny fandraràn'ny rongony satria singa voafehy fandaharam-potoana 1 no mahatonga ny fikarohana tsy ho vita ary izany no iray amin'ireo antony maro mahatonga ny stigma manohitra ny rongony dia miparitaka sy be dia be. Maninona na ny mpifanila trano aminao aza mety mankahala ny fofon'ny rongony ary mieritreritra ny olona ratsy mampiasa azy - mino ny olona ny nofinofy rehetra. Izahay dia mitaiza ny zanatsika amin'ny nofinofin'i santa claus, ny angano nify, ny pasitera any Paska ary izay rehetra nataon'i Disney.
Te hino lainga izahay, mila mariazy angano - ary afaka mamofona zavatra iray ary manondro ireo olona mifoka izany ary mihaino ny tarika jazz sy jam ary milaza amin'izy ireo fa ratsy sy diso ary ratsy izy ireo - voanjo tsotra fotsiny izany. Ary raha mankafy voanjo ianao dia misorata anarana amin'ity fantsona ity ary fantaro misimisy kokoa ny maha-hadalana ny lalàna rongony…
Rohy ho an'ny fampahalalana fikarohana cannabis: